एउटा गाउँको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिरियो तर सरकारलाई थाहै छैन ! – Todays Nepal
एउटा गाउँको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिरियो तर सरकारलाई थाहै छैन !
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jul 12, 2018
सिन्धुपाल्चोकबाट अबैध रुपमा महिलाहरु कामदारको रुपमा इराक पुगेको खुलासा भएको छ । एउटै वडाबाट साढे दुई सय महिलाहरु अवैधरुपमा ईराक पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका ५ बाट अबैध रुपमा साढे २ सय महिलाहरु इराक पुगेका हुन् ।
तर सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक जान नेपालीहरुलाई रोक लगाएको छ । वडा नम्वर पाँचबाट रोजगारीका लागि विदेशिएका ४ सय ४४ जना महिला तथा पुरुषमध्ये २ सय ४७ जना ईराकमा रहेको माइती नेपालले जानकारी दिएको छ । माइती नेपालका अनुसार इराक गएका सबैले अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेका छन् ।
महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको माइती नेपालले केही दिनअघि गरेको घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा एउटै घरबाट श्रीमान र श्रीमती दुवैजना इराक गएको पनि थुप्रै भेटिएको जानकारी दिएको छ । माइती नेपालकी जिल्ला संयोजक पवित्रा घिमिरेका अनुसार उमेर नपुगका धेरै जना नागरिकतामा बढाएर इराका पुगेका छन् ।
वडा नम्वर पाँचबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैको पहिलो रोजाई इराक नै भएको घिमिरेले जानकारी दिएकी छिन् । छोराछोरीलाई हजुरबुबा हजुरआमाको जिम्मा लगाएर श्रीमान श्रीमती दुवै विदेशि जाने गरेको यर्थाथ रहेको उनको भनाइ छ ।‘हामी प्रत्येक घरमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा मार्मिङबाट ८५ प्रतिशत घरबाट विदेशिएको पाइयो,’ घिमीरेले भनिन् ‘विदेशमा हुनेले आवश्यक कागजपत्र पठाउने गरेपछि धेरै त्यसरी जाने गरेका रहेछन् ।’
अबैधानिक माध्यमबाट महिलाहरु इराका गएको भएपनि उनिहरु त्यहाँ खुसी नै रहेको उनीहरुका आफन्तजनले बताएका छन् । दुई सय भन्दा बढी महिलाहरु इराका गएकोमा जम्मा तीन जनाको घरमा समस्या देखिएको माइती नेपालले गरेको सर्वेक्षण देखाएका छन् । तथ्यांक अनुसार सिन्धुपाल्चोकबाट २ हजारभन्दा बढी रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् ।
इराकपछि त्यहाँका स्थानीयको रोजाई दुबई रहेको पनि माइती नेपालले जानकारी दिएको छ । वडा नम्वर पाँचबाट दुबइमा रोजगारीका लागि ४८ जना गएका छन् । उनीहरुमध्ये २५ जना महिला छ्न् । कुबेतमा ३२ र मलेशियामा ३५ जना रोजगारीका लागि गएको तथ्यांकबाट देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका लिस्ती, भोताङ, गोल्चे, गुम्बा, हेलम्बु लगायतका स्थानबाट इराकमा जानेको संख्या बढी छ ।
राति सुतेका मान्छे बिहान मृत भेटिने एउटा यस्तो कारण ! वैदेशिक रोजगारमा हुनेले अवस्य पढौ
यो मितिमा रिलिज हुँदैछ रजनीकान्त र अक्षयको ‘२.०’